बारम्बार विवादपछि विघटनको बाटोमा नेइए निर्वाचन समिति !
इन्जिनियर्स नेपाल | मंसिर ४, २०७८,
नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएशन (नेइए)को चुनावी मिति सारिदैं आएका बेला यो पटक भने निर्वाचन गराउने निर्वाचन समिति नै विघटनको बाटोमा देखिएको छ ।इन्जिनियर घनश्याम भट्टराईले नेतृत्व गरेको नेइएको निर्वाचन समिति निर्वाचन अगाडी नै विघटनको बाटोमा उन्मुख भएको पाइएको छ ।
भट्टराईसहित पाँच सदस्य रहेको नेइएको ३३ औं कार्यकारिणी समिति निर्वाचनको लागि बनेको समिति बारम्बार आन्तरिक विवादमा फस्दै आएको छ । पुर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलिको सल्लाहकार समेत भैसकेका ई. घनश्याम भट्टराईको नेतृत्वमा सिडेन प्रतिनिधिको रुपमा ई. दिपेन्द्र मिश्र र ई. उमेश कुमार गुप्ता, सिनको प्रतिनिधिको रुपमा डा.नारायण प्रसाद चौलागाईं र निओन प्रतिनिधि रुपमा ई.पुर्ण बहादुर कुँवर रहेका छन् ।
बारम्बार सर्दै आएको नेइए निर्वाचनको मिति मंसिर २४ गते तोकिएको छ । पछिल्लो पटक उम्मेदवारी ‘रिसफल’ गर्न दिएकोमा समितिले शुक्रबार उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने क्रममा पाँच सदस्यीय निर्वाचन समितिमध्ये चार जनाले असहमति जनाएका छन् । निर्वाचन समितिले उम्मेदवारको प्रारम्भिक नामावली उपर दाबी विरोध गर्न आज शनिवारसम्मको समय तोकेको छ । तर, आन्तरिक रुपमा मतभेद देखिँदा, उम्मेदवार खारेजी जस्ता विषयले सदस्यहरुबीच मतभेद देखिएको हो ।
शुक्रवार बसेको समितिले कर्णाली प्रदेशबाट केन्द्रिय सदस्यका उम्मेदवार ई.विनोद पुनको विषयलाई यथावस्थामै राख्ने निर्णय गरेको छ । समितिले उनको उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको थियो । निर्वाचन समितिका सदस्यहरुले उठेका उम्मेदवारहरुको समर्थकको नेइए सदस्यता नम्बर नमिलेको, प्रस्तावक र समर्थक दोहोरिएको जस्ता कारण देखाउँदै असहमति व्यक्त गरेका छन् । त्यसमा सदस्य ई. दिपेन्द्र मिश्र र ई.उमेशकुमार गुप्ता रहेका छन् ।
यस्तै पुनको उम्मेदवारीप्रति भने निर्वाचन समिति सदस्य ई. पूर्ण कुँवर र डा. नारायणप्रसाद चौलागाईले असहमति जनाएका छन् । निर्वाचन समिति आफैं भित्र भएको दाउपेचले मङ्सिर २४ मै निर्वाचन हुने नहुने अन्योलता बढेको उम्मेदवारहरुको भनाई छ ।